IMicrosoft Edge ye-iOS iya kuhambelana nePassword kunye neLastPass | IPhone iindaba
URuben inyongo | | Iapps zokusebenza
Isikhangeli sikaMicrosoft, iEdge, besikho kwezixhobo ze-iOS iiveki ezimbalwa. Inkqubo ye- Uhlaziyo lwamva nje kwisikhangeli esibalulekileyo sikaRedmond kwaye ishiye i-Internet Explorer bucala, ifumene uhlaziyo kwiiveki ezimbini ezidlulileyo apho ihlengahlengise ngokugqibeleleyo kwiscreen se-iPhone X. Nangona kunjalo, ehovini kuhlobo olutsha abasele beluvavanya abathathi-nxaxheba benkqubo yeTestFlight.
La Inguqulelo entsha yeMicrosoft Edge ye-iOS iya kuba yi-41.7 kwaye iya kudibanisa inkxaso kwizandiso ezibini ezidumileyo kwi-iOS. Aba baphathi bababini begama eligqithisiweyo I-LastPass kunye ne-1Password. Ngokudityaniswa kwezi nkonzo zombini, umsebenzisi uya kuba nakho ukugcwalisa iziqinisekiso ngokukhawuleza okukhulu xa kungena iinkonzo zewebhu okanye usetyenziso kwisikhangeli seMicrosoft. Oko kukuthi, umsebenzisi kuya kufuneka akhethe ulwandiso aluthanda kakhulu kwaye uya kugqibezela kuphela iibhokisi zencoko yababini.
Kwakhona, le nguqulo intsha yeMicrosoft Edge ye-iOS nayo iya kuba nenqaku elitsha elifihliweyo. Kwaye kunokwenzeka ukuba Sebenzisa i-Force Touch yezixhobo ezifanelekileyo. Ngokucinezela ngokunyanzela kwi-icon ye-Microsoft Edge app, imenyu eneendlela ezahlukeneyo ziya kuvela. Phakathi kwezona zibalulekileyo kunokwenzeka ukuba kuvulwe isithuba esitsha sokuhambisa; yenza uphando kwi-Intanethi usebenzisa imiyalelo yelizwi; Skena ikhowudi ye-QR ukutyelela iwebhu efihla ukudityaniswa; okanye ukwazi ukukhangela ngasese.
Njengoko sikuxelele, oku Inguqulelo entsha yeMicrosoft Edge ye-iOS iyafumaneka, ubuncinci, kubathathi-nxaxheba benkqubo yeTestFlight. Kwaye ingxelo yokugqibela yokugqibela kulindeleke ukuba ifumaneke kuluntu kwisithuba seeveki ezimbini. Ngolu hlaziyo, uMicrosoft ugxininisa ukuba ifuna zonke iinkonzo zayo zihlaziywe kuwo onke amaqonga.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iapps zokusebenza » IMicrosoft Edge ye-iOS iya kuhambelana nePassword kunye neLastPass
I-iPhone X yexabiso eliphantsi kwi-2018?